बिर्सने रोग (डिमेन्सिया) के हो ? – RealPati.com
डा. इशा ढुंगाना श्रेष्ठ
स्नायु रोग विशेषज्ञ
आफैले राखेको सामान एकछिनपछि कहाँ राखियो, बिर्सियो, कहिँ जान निस्किएको बाटो बिर्सने, एकैछिन अगाडि के भएको थियो यादै हुँदैन । यो समस्या धेरैलाई हुन्छ जसलाई मेडिकल भाषामा डिमेन्सिया भनिन्छ, बिर्सने रोग । बिर्सने बानि छ भन्दैमा सबैलाई डिमेन्सिया नै भएको छ भन्ने हुँदैन । यो उमेर बढ्दै जाँदा देखिने समस्या हो ।
के भएमा डिमेन्सिया हुन्छ ?
•	बिस्तारै सोच्ने क्षमता कम हुँदै जाँने
•	कुरा सम्झन नसक्ने
•	गइरहेको ठाउँ नौलो लाग्ने
•	बोल्नलाई शब्द नआउने, सोच्नुपर्ने
यो क्रमिक हुने प्रक्रिया हो,जसमा गिदिभित्रको नसा कमजोर हुँदै जान्छ, मेडिकलक भाषामा यसलाई न्यूयो डिजेनरेटिभ, न्यूरो कङ्निटिभ डिसअर्डर पनि भनिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको मस्तिष्क पनि कमजोर हुँदै जान्छन् । दिमागमा भएका स्नायुहरु, जसले मानिसको सोच्ने, सम्झने काम गर्छन्, त्यस्ता स्नायु नियन्त्रणको लागि आवश्यक केही रसायनको तह घटबढ हुन्छ । प्राय यो समस्या ६० देखि ६५ वर्ष नाघेपछि देखिन्छ तर हिजोआज डिमेन्सियाका बिरामीहरु ५०, ५५ वर्ष उमेरसमुहका पनि भेटिएका छन् । ८० वर्षभन्दा माथि उमेर कटेपछि ९० प्रतिशत भन्दा धेरैलाई यो समस्या देखिन्छ ।
सबै बिर्सने समस्या डिमेन्सिया होइन । कामको धेरै चाप भएको बेलामा बिर्सने, धेरै सोच्ने बानिले, चिन्ता भएमा, डिप्रेशनको समयमा पनि बिर्सन सकिन्छ तर यस्ता समस्या डिमेन्सिया होइनन् ।
अल्जाएमर्सको कारण हुनेडिमेन्सिया – ५० देखि ७० प्रतिशत जति मानिसमा यो खालको डिमेन्सिया हुन्छ । दिमागको नसा कमजोर हुने, नसाको काम नियन्त्रण गर्ने रसायन घटबढ हुने । यस्ता बिरामीले भर्खरै के के भएको छ भन्ने कुराहरु बिर्सन्छन्, उनीहरुले पहिलेका कुराहरु सम्झन सक्छन् ।
भास्कुलर डिमेन्सिया – २० प्रतिशतमा हुन्छ । गिदिभित्रको रगतको नसामा समस्या आउने र रगत सञ्चालन राम्ररी नहुने, यसले नसाहरु मर्दै जाने ।यी बाहेक फ्रन्ट्रोटेम्प्ररल डिमेन्सिया, पार्किन्सन्स डिमेन्सिया, टाउकोमा चोटपटक लागेपछि हुने डिमेन्सिया पनि हुन्छन् ।
मानिसको शरीरमा कुनै भिटामिनको कमि भएको खण्डमा, थाइराइडको समस्याले डिमेन्सिया निम्त्याउँछ र कहिलेकाहीँ गिदीभित्र पानी जमेको भए पनि डिमेन्सियाको समस्या देखा पर्छ । तर यस्तो डिमेन्सिया उपचारपछि निको हुन्छ ।
यही कारणले डिमेन्सिया हुन्छ भन्न सकिदैन । भास्कुलर डिमेन्सिया हाम्रो शरीरमा रक्तचाप, चिनीको मात्रालगायत अन्य पौष्टिक तत्वको असन्तुलन भएमा हुन सक्छ तर अल्जायमर्स डिमेन्सियाका लागि यस्ता तथ्य छैनन् । उमेर बढेसँगै बिस्तारै देखिने रोगमध्ये एक रोग हो । शरीरमा दीर्घरोग भएमा पनि यसको सम्भावना रहन्छ ।
•	यसको लक्षण प्रक्रियागत रुपमा देखा पर्छ ।
•	सुरुमा कुरा बिर्सने, बोल्नलाई शब्द नआउने हुन्छ ।
•	हिसाब किताबमा अलमल हुने, ठाउँहरु बिर्सने हुन्छ ।
•	धेरै बिर्सने समस्या हुन्छ, मुस्किलले आफ्नो स्याहार गर्छ ।
•	सबै कुरा बिर्सने, खाना खान, कपडा लगाउन, सहयोगीको आवश्यकता हुन्छ ।
डिमेन्सिया एकै पल्ट बिर्सने समस्या नभएर बिस्तारै देखिदैँ जाने समस्या हो । वृद्धहरुले कहिलेकाहिँ यस्तो व्यवहार देखाएमा परिवारले नबुझ्न पनि सक्छन् । यसले अरु समस्या पनि आउँछ ।
थाइराइड, टाउकोमा पानी जमेको, भिटामिनको कमीले गर्दा देखापरेको डिमेन्सियाको उपचार सम्भव छ । तर यो बाहेक अरु डिमेन्सियाको नियन्त्रण मात्र गर्न सकिन्छ, बिरामीको जीवनलाई सजिलो बनाउने मात्र गर्न सकिन्छ । बिरामीलाई स्याहार गर्ने, केहि औषधि छन् जसले डिमेन्सियालाई बढ्न दिँदैन ।
रोग नलागोस् भन्न के गर्ने ?
दिमागलाई सक्रिय राख्ने – नयाँ भाषा सिक्ने, हिसाब गर्ने, संगित सिक्ने, किताब पढ्ने, रोग नलागोस् भन्ने उपाए त छैन । तर सन्तुलित आहार तथा स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
•	एक समयमा पुगेपछि बिरामी पूर्ण रुपमा अरु व्यक्तिमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । परिवारका सदस्यले समयसमयमा खानपान, हेरचाह गर्ने,
•	झोक्राएर बस्न नदिने,
•	बालबालिकासँग खेलाउने,
•	पुराना कुराकानी स्मरण गराउने,
•	समयमा सुताउने उठाउने,
•	दिमाग सक्रिय राख्नको लागि भजन गाउँन लगाउने, विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय गराउने ।
यसले डिमेन्सिया निको हुन्छ भन्ने हैन, तर यसको कारणले हुन सक्ने अरु रोगबाट जोगिन सकिन्छ ।
(लेखक काठमाडौं न्यूरो तथा जनरल अस्पतालको स्नायु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।)
आज हरि बोधिनी एकादशी–तुलसी विवाह पर्व मनाइँदै
दशैँमा खसीबोका: कहिलेसम्म भारतकै भर?